China China ahụhụ na-agbapụta oriọna factory na-emepụta | Na-eri nri
Sterilization & ọcha
Obere ahụhụ ellinggbapụta Oriọna
Ejiji na nke bara uru, dị mma maka ojiji ebe ị na-atụrụ ndụ. USB caji, nwere ike iji ebe ọ bụla ịchọrọ. Na mmiri mmiri na-asọ oyi, ihe nchekwa dị mma ma dị irè, kwesịrị ekwesị maka iji nne na nwa ebu n'afọ. Ọkụ dị nro abalị na-ekpo ọkụ, dị mma ma dị mma. 10 awa oge nhazi oge. Ọfụma na-achụpụ anwụnta site na imepụta 30m2 n'ime ụlọ ma ọ bụ 3 mita n'èzí mpaghara nchedo.
Gosiri Power 5W
Nha ngwaahịa 77 * 76 * 138mm
Ogwe njikwa Njikwa aka (oge elekere 10)
Mpaghara Ngwa 30m2 (n'ime ụlọ), 3m (n'èzí)
Nkwakọ ngwaahịa akụkụ 515X415X415mm（40PCS / katọn)
1. Ejiji na nke bara uru, dị mma maka ojiji mgbe ị na-atụrụ ndụ.
Push-button amalite maka ịdị mma onye ọrụ. Nbudata USB, enwere ike iji ya ebe ọ bụla ịchọrọ. Na mmiri mmiri na-asọ oyi, nchekwa dị mma ma dị irè, kwesịrị ekwesị maka iji nne na nwa ebu n'afọ. Ọkụ adụ n'abalị ìhè, mma na ala. Oge awa 10. Irè anwụnta n'ụzọ dị irè site na ịmepụta 30m2 n'ime ụlọ ma ọ bụ 3 mita n'èzí mpaghara nchedo.
2. Ọrụ dị mfe
Pịa ike na bọtịnụ ahụ ga-agbanye ọkụ ọkụ ọkụ iji gbanye ọnọdụ anwụnta na-azọpụta ike. Emechi akpaaka mgbe awa 10 gachara.
3. Ọma anwụnta
Mepụta 30m2 ime ụlọ ma ọ bụ 3 mita n'èzí mpaghara nchebe, zuru oke maka ịme ntụrụndụ na ebe ime ụlọ na n'èzí dị ka ahịhịa, ihe owuwu ụzọ mbata, patio, ọdọ mmiri ma ọ bụ oche; nkà na ụzụ gosipụtara iji lụọ anwụnta na ebe kachasị sie ike n'ụwa; enye 10 awa nchebe.
4. Nkecha, adaba, obere
Igwe anwụnta a tụkwasịrị obi bụ onyinye zuru oke maka onye nwe ụlọ ọhụrụ, onye nnabata, onye lara ezumike nká, onye gụsịrị akwụkwọ na kọleji, onye na-elekọta ubi ma ọ bụ onye nlekọta.
5. 100% mma maka mmadụ & anu ulo
Ngwunye na-ere ahụhụ na-adị mma maka nwanyị dị ime na nwa. Enweghị nsí, enweghị nsi, ụzarị ọkụ, ọ dịghịkwa mkpa ikpocha ahụhụ ndị nwụrụ anwụ, enweghị batrị achọrọ na obere ụgwọ ọkụ. Na-enye gị ebe obibi nchekwa na nchekwa obibi na gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: Uwe Steamer
Osote: Mini Portable Air oyi
Lmụ ahụhụ na-asọ oyi Oriọna
Anwụnta na-asọpu Oriọna
Anwụnta ọgwụ ọchụ mmanụ Oriọna
Anwụnta na-egbu oriọna
Ọdịdị ala na-enweghị eriri
Ọla Ultrasonic Cleaner
Steamer uwe na-ejide aka
Banyere Meiling / MAK